Indlu yaseAlentejo eAlqueva
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTomás
Kule ndlu iqhelekileyo ye-Alentejo, ebekwe e-Aldeia da Estrela, sinokuphumla, siphumle kwaye sizivumele ukuba sithandeke ngokuzola kwe-Alentejo.
Le ndlu inegumbi lokulala elineebhedi ezintathu ezingatshatanga kunye nokuba nokwenzeka kwenye kwigumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elipholileyo elinendawo yomlilo kunye nekhitshi. Igumbi lokuhlala linombono wedama elisecaleni kodonga lwegadi. Apha, kukho ivaranda kunye netanki encinci yokupholisa xa ubushushu buvuliwe.
4.72 · Izimvo eziyi-54
I-Alqueva Dam yimizuzu engama-32 ukusuka kwindawo. IBarrancos ikumgama wemizuzu engama-55 ngemoto, njengoko kunjalo kumda welizwe laseSpain. Isikhululo sikaloliwe esikufutshane yiSikhululo sikaloliwe saseCuba, kumgama oziikhilomitha ezingama-77.
Umbuki zindwendwe ngu- Tomás
Ineendawo zasemaphandleni ezilondolozwe kakuhle, iimeko ezibalaseleyo zokusingqongileyo, imimandla eyahlukeneyo yomhlaba, ukuzingela kunye neendawo zokuloba zezinye zezizathu eziphambili zokutyelela le nxalenye yelizwe. Kukho izinto ezininzi ezinokwenzeka zokuthatha ixesha lakho lokukhulula ecaleni kweendonga zechibi elikhulu ngokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile emasimini, ipikniki, ukuloba emlanjeni okanye ukukhwela iphenyane nayo yonke enye into efunwa yingqondo yethu.
Ineendawo zasemaphandleni ezilondolozwe kakuhle, iimeko ezibalaseleyo zokusingqongileyo, imimandla eyahlukeneyo yomhlaba, ukuzingela kunye neendawo zokuloba zezinye zezizathu eziph…
Inombolo yomthetho: 18471/AL